संरक्षणका लागि ब्लगिङ (Blogging4Conservation]: अतिथिको कलम | Conservation Blog in Nepal
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Monday, August 13, 2012 with No comments
माधव लामिछाने, रसुवा ।
थेसिसको लागि तयारी गरिरहँदा मोवाईल बज्छ र उठाउछु । उताबाट आवाज आयो 'म प्रेम तामाङ , माधव जी के गर्दै हुनुहुन्छ - 'कालिका हिमालय उच्च माविमा गाणित विषयको लागि शिक्षक खाली भयो । तपाई जस्तो मान्छे जिल्ला र्फकनु पर्यो, तपाईसँग शिक्षण अनुमति पत्र छ कि छैन -' मैले भने 'सैनिक महाविद्यालय भक्तपुरमा शिक्षण गर्दैछु । पर्ढाई डिग्री सकिन लाग्यो, परीक्षा सकें रिजल्टको प्रतिक्षा गरी थेसिस गर्दैछु दाजु ।'
'यसपाली जसरी पनि हामी स्थानीयलाई नियुक्ति गर्छौ।' उहाँको ती आवाजले मलाई झन् जिल्ला र्फकने चाहनालाई नवीकरण गर्यो । मैले भनें 'अनुमति पत्र त छ तर ड्रि्रीको रिजल्ट बाँकी छ त्यसले केही फरक पर्छ कि -' 'हामी व्यवस्थापनमा छौं , मिलाउला फरक पर्दैन, म पर्सी जिल्ला जाँदैछु र्सर्टिफिकेट मलाई पठाइदिनु म आफै निवेदन दर्ता गरिदिन्छु' भन्ने आवाज पछि पनि मैले हुन्छ भनें । पर्सिपल्ट बहिर्गमित लडाकुको बन्द परेकोले र्सर्टिफिकेट पठाउन सकिन ।
स्थानीयलाई अवसर दिने भने पनि अर्का एकमात्र डिग्री सक्नुभएका दाजुलाई पनि सोधें । उहाँको पनि रसुवा र्फकने चाहना नदेखेपछि ढुक्क भएर आफु कार्यरत सैनिक महाविद्यालयमा राजीनामा लेखें रसुवामा आफ्नो पक्का देखेर । विद्यालय छाड्नु भन्दा तीन महिना अघि जानकारी नदिए तीनमहिनाको तलव क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने नियमले म राजीनामा दिन औताएँ ।
पुस २५ गते रसुवा पुगेर दरखास्त दर्ता गराएँ, मैले दरखास्त दिने बित्तिकै सभासद र विद्यालयका प्रअ उमा आरसीको बैठक बसेछ । सभासदज्युले लेखापाल हरि ढकाललाई निर्देशन दिएछन्, चण्डेश्वरी उच्चमावि तुप्तेमा कार्यरत आशा र्राईलाई बोलाउन । भोलिपल्ट अन्तिम म्यादका दिन उनको पनि दरखास्त पर्यो । दोस्रो दरखास्त परेपछि एकदिन म आशा मिर्सलई भेट्न तुप्चे गएँ । उहाँले मलाई बिएड् दोस्रो वर्षा कालिकामा पढाउनु भएकोले शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध थियो । कुराकानी भयो आफुलाई विद्यालयले बोलाएको र उमेर पनि ३५ वर्षकट्न लागेकोले दरवन्दीमा बस्ने इच्छा भएको तथा कालिका हिमालयमा प्लस टु र्साईन्स चलेकोले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको छात्रबृत्तिमा छोरी पढाउन जान चाहेको बताउनुभयो । मैले भने 'करार दरबन्दीका लागि उमेरहद लाग्दैन चिलिमेको छात्रबृत्ति रसुवालीलाई हो बाहिरकालाई होईन । तुप्चेमा जे छ कालिकामा पनि त्यही हो त्यसैले मेरो ठाउँमा मलाई छाडिदिनुहोस् । मेरो घर तपाईलाई छोडेर म कहाँ जाउँ ।' उहाँले भन्नु भयो 'मैले तिमीसँग भिडेर खान त सक्तिन तिमी फ्रेस छौं । सैनिक स्कुलमा मैले पनि ४/५ पटक परीक्षा दिएर प्रयास गरेको नाम निकाल्न सकिन तर तिमीले निकाल्यौं । विद्यालय निरीक्षकमा पनि दिएँ, सकिएन । परीक्षा दिनुपर्ने भएमा म आउदिन, त्रि्रो ठाउँमा तिमीले नै गर । त्यति भनेपछि म फर्किएँ । पछि परीक्षा तोकियो । परीक्षाको दिन आशा मिस पनि आउनुभयो । उहाँले मलाई प्रेम दाईले गरेको कल समरी देखाउँदै 'मलाई प्रेमदाईले फोन गरेर जसरी भएपनि आउन भन्नुभएको छ, मैले दरखास्त झिके पुरै रद्ध पारिदिने रे, फेरि उमा मिसले पनि मेरै हुन्छ भनेपछि आएँ' भन्नुभयो । उहाँले त्यसो भन्दासम्म परीक्षा हुने भएपछि राम्रो लेखेर हराउँछु भन्ने मेरो कन्पफडेन्स थियो ।
परीक्षा चल्यो, प्रयोगात्मक भयो । प्रयोगात्मकमा मैले तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो गरें । दश मिनेट पढाउने समय दिइएको थियो । आशा मिसले समय मिलाउन नजानेर ५ मिनेटमै पर्ढाई सक्याएर घण्टी बजाउन लगाउनुभयो ।मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष प्रेम अध्यक्ष , प्रअ उमालयायत ६ जना थिए । प्रयोगात्मक सकिएपछि अध्यक्ष प्रेमलगायत विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया लिए 'कसले पढाएको राम्रो - ३ जा बाहेक सबै विद्यार्थीले माधव लामिछाने भनी हुटिङ्ग गरे पछि प्रेमले आशा मिसको बढी पर्ढाई भएकोले मिस राम्रो भन्न बार्गेनिङ गरेछन् ।
सभासदको कालो कर्तुत बल्ल त्यतिबेला मैले बुझें । प्रयोगात्मक पछि अन्तवार्ता भयो । अन्तवार्तामा एकजना तटस्थ र आशा मिसको पक्षमा ४ जना देखेको थिएँ ।
भोलिपल्ट परीक्षा समितिका एकजनाले नेताज्यूलाई परीक्षफल घोषणा गर्नु पूर्व नै आउट गर्दै गरेको थाहा पाएँ । लिखितमा त माधवले जित्यो । महिला र जनजातिको नम्बरले गर्दा माधवले भ्याएन । पछि बुझदा राम्ररी थाहा भयो । मैले १२ भन्दा बढी नम्बरले लिडिङ गरेको रहेछु । मलाई हराउन उनीहरूले ड्रि्री र्सर्टिफिकेटको र शिक्षा नियमावलीमा प्रावधान नै नभएको करारको अनुभवको नम्बर दिएर जनजाति र महिला भनेर आफूखुसी नम्बर राखेर मलाई हराएछन् । यसरी तयार गरेको रिजल्ट सभासदज्युले १५ दिनसम्म पनि व्यवस्थापन समितिमा अनुमोदन गराउन सकेनन् । स्थानीय सक्षमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने पक्षमा ६ जना र -अध्यक्षको निर्णय मत समेत ) आशा मिसको पक्षामा ५ जा भएछन् । सभासद पक्षका ५ जना बसेर निर्णय गरी सिन्दुरे जात्रा सहित ताप्लेजुङकी आशा र्राई कालो घोडामा र प्रेम तामाङ सुरूमा कालो छाता ओढेर चढेका थिए । प्रेम, आशा र्राई र पछि उमा आरसी तीनजान चढेको घोडा धपाउन लाठी सहित दुई गोठाला थिए । सबैको पोशाक कालो थियो अपसगुनको प्रतीक ।
हुन त संविधान बनाउन रसुवाली जनताको मत पाएका सभासदलाई शिक्षा ऐन बनाउन कत्रो कुरा रहृयो र ! जे नियम बनाउदा आफुले चाहेको मानिस भित्रिन्छ, त्यही बनाए, मुखै कानून । उमा आरसीलाई तीसवर्षबस्दा पनि रसुवा प्रति प्रेम पलाएन, रसुवालीलाई अवसर दिनु हुँदैन । आफु जस्तै बाहिरीया ल्याउने सोच । आफुले बिएड् गरेर उमाविको प्रिन्सिपल र क्याम्पस चिफ बन्न हुने, स्थानीयले शिक्षक बन्न नहुने - यस्तो नियम कहाँ छ - रसुवालीलाई लविङ् र साँठगाठ गर्ने तपाईलाई पनि रसुवा बस्ने अधिकार छैन र्।र् इज्जत छ भने बाटो तताए हुन्छ । डिग्री पास नगरेका प्रिन्सिपल भएर हाम्रो जिल्लाको विद्यालयलाई उच्चमावि शिक्षा परिषदको कालो सूचिमा पार्न पाइदैन । ताप्लेजुङकी मैयाको त कुरै नगरौं तिनी पनि डिग्रीको परीक्षा मात्र सकेर रिजल्ट नभैकन मलाई बिएड दोस्रो वर्षपढाउन आएकी थिईन् । । अस्ट्रेलिया उड्छु भनी बीच सेक्सनकै छाडेर गएकी, रसुवा लाली फेरि चढेछ । डिग्रीको परीक्षा सकेकालाई काठमाण्डौंका राम्रा कलेजले पार्ट र्टाईम दिन्छन् । रसुवाको कालिका हिमालयमा जिल्ला बाहिरकाले पाउने जिल्लावासीले नपाउने नियम छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । जे होस् आशा र्राईले यसपटक भने रामै काम गरिन् । घगडान नेताको पुच्छर समाएर बैतरणी तरिन्, जालजेलद्वारा एक आफ्नो विद्यार्थी हर्राई ठाउँमा जना तीनलाई केही लाज लागेन ।
यसपाली ठूलो लाज मलाई भयो, मैले सक्षमसँग हार्न पाइन, असक्षमसँग हार्न पर्यो । हुनत कालिका हिमालयमा यस्ता घटना यसअघि नै नभएका होइनन्, । यसअघि नेपाली विषयमा डिल्लीकुमार देवकोटा बाहिरीयासँग यसरी नै पछि परेका थिए । उहाँ जस्ता राम्रो मान्छे मत होइन, म स्वीकार गर्छ, देवकोटा दाईसँग मेरो चिनजान नभएपनि मलाई थाहा छ त्रिविबाट एमफिल गर्ने अवसर त्रिविकै उपप्राध्यापकले त पाउँदैनन् त्यो अवसर पाउने मानिस सानो तिनो क्षमताको हुँदैन । यस्ता मानिस रसुवा जाने कुरा सोच्दा पनि सोच्दैनन् तर रसुवामा कक्षा ५ पास गरेर व्यवस्थापन समितिमा छिर्ने र डिग्री पढेकाहरूको मुल्याङ्कन गर्ने हरिलठ्ठकहरूलाई यस्तो कुरा के थाहा ? प्रेम तामाङ मिठो बोली बोल्ने, मैले पनि धेरै मन पराएको मानिस, चुनाव जित्नु अघि र जितेपछि कालिका हिमालयमा प्राङ्गणमा उनले गरेको भाषण सुनेर ताली बजाउने एक म पनि हुँ । उनले भनेका थिए म रसुवाको ५ वटा ज -जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी र जनशक्ति) को सदुपयोग गरेर निकै सुन्दर रसुवा बनाउँछु । ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछु.....। त्यही मिठो भाषणले झुक्यायो मलाई पनि । हुन त प्रेम तामाङको राजनीतिमा मेरो केही लगानी छैन । त्यसैले प्रेम तामाङले गरेको व्यवहारमा मैले चित्त दुखाउने ठाउँ छैन किनकी उनले त हरीप्रसाद दवेकोटा, जो निजी स्रोतमा रसुवाको राम्चेस्थित सेतीभूमे माविमा गणित र विज्ञान पढाउने त्यत्तिकै सक्षम शिक्षक थिए साथै पार्टीको कार्यकर्ता पनि, जसले प्रेम तामाङलाई सभासद् बनाउन एक महिनाको तलव ७००० र भोट माग्दै हिडेर श्रम पनि खर्च गरेका थिए, अरूको सभासद् जनतालाई जागिर खुवाउँछन् हाम्रा सभासद् भएका जागिर पनि खाइदिन्छन् । सभासदले मलाई त केही पनि दिनुर्पर्दैन तर अलिकति मात्र पनि नैतिकता छ भने हरीसरबाट चुनाव जित्नको लागि लिएको त्यो ७ हजारको सावाँ व्याजसहित भोलि फिर्ता गरिदेऊ । तर तिमीमा त्यति ठूलो नैतिकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अस्तिसम्म तिमीलाई देख्दा नमस्कार गर्न उठ्ने यी हातहरू बरू थुकले भरिएर आउँला, त्रि्रो अनुहारमा थक्नु नथुक्नु त्यो अर्को कुरा ।
परीक्षा सकेको भोलिपल्ट मैले सभासदलाई भनेको थिएँ 'रसुवाभरिमा निम्न आर्थिक स्तर भएको म पनि हुँ, तपाईले नै बोलाएर आएको, मेरो जागिर पनि अब त गैसक्यो त्यसैले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एक पटक सोच्नुहोला ।' आखिर यति किन भने मैले त्यो माहामानवलाई - त्यसैमा मलाई ठूलो ग्लानी छ । जागिर त मेरो लागि ठूलो कुरा होइन, फेरी मास्टरीलाई मैले जागिर भन्ने गरेको छैन । तैपनी मेरो दुःख यतिसम्म मात्र हो, रसुवामा रसुवालीको भाग रहेनछ, पढेको मानिस राजनीतिमा नहुनु ठूलो समस्या हो । एसएलसी पास गरेको सभासद्को बुद्धि -२ भन्दा बढी रहेनछ, र त्यस्ता डुकुलठ्ठक सभासद्लाई पत्याउने मेरो पनि बुद्धि प्लस टु भन्दा बढी होइन । यस्तो सभासद्ले संविधान सभामा कस्तो संविधान लेख्ला - स्थानीयताको हकमा के लेख्ला ? आत्मानिर्णयको अधिकार भनेको के लेख्ला ? स्यात्तता कस्तो लेख्ला ? अधिकारको विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ला ? कस्तो लोकतन्त्रको वकालत गर्ला, रोजगारीको हक कसरी लेख्ला ? धेरैले धेरै कुराहरू भने, आजकल सभासद्लाई नाक थेप्चो तिव्वती घोडा साह्रै मन पर्छ अरे ! त्यसैले सभासद् चढेको कालो घोडा तिव्वती हो । कोही भन्छन् होइन अरेवियन नै हो । ठूलो गाँठिको महंगो घोडा, तर मैले केही खुट्याउन सकिन । आखिर प्रेमले चढेको घोडा कुन हो त- छुट्याउन बैद्य बा को २, प्रदिप नेपालको २ पुस्तक पढे, कही पनि त्यसको व्याख्या भेटिन । झन् वीपिको आत्मकथा र आत्मवृतान्तमा झन् छनक सम्म पनि रहेनछ् । विलक्लिन्टनको किताव किन्न भोटाहिटी पुगेको मलाई घोडा चिन्ने नसाले अझै छाडेन । बोकें मार्क्सको DAS CAPITAL।
अहिलेको रसुवाको समस्या भनेको प्रेम प्रवृत्ति हो । माधव कहिल्यै व्यक्तिको विरोध गर्दैनन्, गर्छ प्रवृत्तिको विरोध । प्रेम भाई तैले अब चाहेर पनि गाँस फिर्ता गर्न सक्छस् - अब सक्दैनस् । हुन त महिनाको ६० हजार खाने सभासद्लाई गरीवको गासँको महत्व के थाहा ? लहडमा चल्न र वर्षो एक महिनाको तलव जागिर लगाई दिए वापत पाउन जस्तो सुकै कार्य गर्ने प्रेम प्रवृत्ति । अर्का आशा र्राई प्रवृत्ति बाहिरीयाहरूमा क्षमताको कमी छ र घगडान नेता र राजनीतिक दलको खुट्टादेखि टाउकोसम्म मोल्ने र दाम तिरेर खुसी बनाउने अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति, अर्को उमा प्रवृत्ति, बाहिरीया सोच बाहिरैको ल्याउनुर्पर्छ, जिल्लावासीलाई अवसर दिनुहुदैन, अर्को समस्या जुनसुकै कुरालाई राजनीतिक चस्माले हेर्न यहाँको नेताको गिद्धे दृष्टि, बाउ आफ्नै पार्टी नरहे यहाँ बाउ छोराको सम्बन्ध सकिन्छ, जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी टाढै जाओस्, । म रसुवा जाउँला र धेरै धन कमाउँला भनेर रसुवा आउन खोजेको थिइन् आऊनुमा ममा एक मात्र स्वार्थ थियो, खासमा कालिका हिमालयमा साधान र स्रोत भएको र त्यसलाई गति दिन एक सहयात्री बन्ने एक मात्र इच्छा, मैले ग्रिन गार्डेन वोडिङ्ग चलाएको तीन वर्षो अनुभव, उत्तरगया वोर्डिङ्ग स्कुल वेत्रवातीमा पढाएको एक वर्षो अनुभव र सैनिक माहाविद्यालयमा पढाएको दुई अनुभव गरी कालिका हिमालयलाई ल्याङग्वेज र कल्चरल ल्याव सहितको आधुनिक मिडियम स्कुलको रूपमा स्थापित गराउन सहयोग गरी सरकारी स्कुलमा छोराछोरी पढाउने निम्नस्तरको जनताको सेवा गर्ने र जगौँ जुग जिउने । कालिकामा बढा शिक्षक जाने र नयाँ शिक्षक भित्रिने युग भएकाले त्यो असम्भव थिएन, यसको लागि म प्रेमको कार्यकर्ता होइन, प्रेमलाई मेरो कार्यकता बनाउन चाहन्थेँ, उसले सायद यही सोच्यो, रसुवालीले राम्रो शिक्षा पाए भोलि मेरो पछि को लाग्छ ? प्रेम भाई यति सोच अहिलेलाई कहिलै पनि लहडमा र सिमित व्यक्तिको सल्लाहमा चल्न हुदैन , ज्ञानेन्द्र होइन्छ एक दिनको, एक क्षण्को मस्ति त के हो र - अहिले हेर न त रहृयो आफु, न रहृयो राजसंस्था, तिमीलाई त्रि्रो पार्टिको साइको थेरापिस्टका कहाँ उपचार गराउँ छ की गराउँदैन !
यस घटनाको असर दिर्घकालीन रहन्छ, ताप्लेजुङकी मैयाँले भनेकी छिन् 'थोरै जग्गा किन्ने रसुवामा, छोरीको नागरिकता रसुवाबाट बनाउने र प्लस टु पछि चिलिमेको छात्रवृतिमा पढाउने ।' हाम्रो रोजगारी आमाले खाइन, हाम्रा भाइबहिनीको पढ्ने अधिकार छोरीले खान्छिन कति ठूलो रोग सल्किएछ रसुवामा । रसुवाकी बहिनी अहिले यति कमजोर अवस्थामा छिन् की चित्कार गर्न पनि सक्दिनन्, लुट प्रेम लुट मौका यही हो , आशा, उमा र प्रेम मिलेर लुट् ,आफुले चाहेको पोजमा ।
प्रेम तामाङको तन्त्रलाई लुट तन्त्र - Spoil Sytem) भनिन्छ । राष्टपति जर्ज वासिङटनले सिमित पोष्टहरूमा राजनीतिक नियुक्ती गर्न थालेसँगै अमेरिकामा सुरू भएको लुट तन्त्र सन् १८८१ एक बेरोजगार युवकले राष्टपति गाफिर्ल्डको हत्या गरेसँगै सकिएको थियो । रसुवामा २ सय जना डिग्री पढेका युवा बेरोजगार जम्मा भएपछि लुट तन्त्र सकिन्छ र त्यससँगै प्रेम जस्ता राजनीतिज्ञको राजनीति पनि मसानघाटमा पुग्नेछ । कहिल्यै नर्फकने गरी र "रसुवा छोडो" आन्दोलनसँग नवीन रसुवाको जग हामी हाल्नेछौँ । जहाँ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह हुनेछ अनि बन्नेछ हाम्रो रसुवा प्रेम तामाङ तिमीलाई । रसुवालीको अमूल्य भोटको गुन तिमीले राम्रै तिर्यौ । अब अर्को चुनाव लड्न चाहिँ ताप्लेजुङ नै गए कसो होला !
Labels: अतिथिको कलम
हावाको व्यापारमा समुदाय अधिकार
Posted by Prem Prasad Paudel Posted on Monday, August 13, 2012
वन सहजकर्ता सञ्जाल, नेपाल
आज भन्दा करिव ५ वर्ष अगाडि हावाको व्यापारका चर्चा चल्दा सवैको कान ठाडा भए । राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले पनि हावा बेचेर पैसा आउने भयो भन्ने सन्देश ठूला अक्षरमै लेखे । वन अभियानमा लागेका हामी सवैलाई खुसीको सन्देश भएको थियो । हामीले वन जोगाएर वातावरण राम्रो पारेको र स्वच्छ हावा निकालेका छौं भन्ने सम्मको कुरा थाहा थियो तर हावा विक्रि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच वाहिरको विषय थियो । त्यसवेलामा कसरी वेच्ने भन्ने चर्चा थिएन तर पैसा आउन भो भन्ने चर्चा गजव्वैसँग चल्यो । चामल, नुन, तेल जस्ता ठोस वा तरल पदार्थहरू किनवेच गरेका हामीलाई हावा वेच्ने कुरा अनौठो नैं थियो । कतिपयलाई हावाको व्यापारका कुरा गँजेडीका गफ जस्तै लाग्थ्यो । हामीले निकालेको हावा के मा कसरी पोको पार्ने, उडेर जाने हावालाई कस्ले पैसा हालेर किनिदेला अनि म किन्दिन भनेमा त्यसतो हावा कसरी जोगाएर राख्ने, कुन हावा चाँही हाम्रो भनेर कसरी चिन्ने भन्ने कौतुहलता सवैलाई थियो । अहिले पनि केही प्रश्नको उत्तर प्राप्त भैसकेको छैन ।
विश्वमा यो हावा व्यापारको कतिपय पक्ष अन्यौलतामा नैं रहेको छ । कार्वन भन्ने वस्तु जुन ग्याँस -हावा) को रुपमा रहँदा हानीकारक हुन्छ तर ठोसको रूपमा रहँदा त्यसले कुनै हानी नोक्सानी गर्दैन । हाम्रा रुखहरूले वायुमण्डलमा रहेको ग्याँस रूपी कार्वनलाई रुख वा विरुवाले खाना पकाउने प्रक्रिया मार्फ तान्दछ र रुखले आफ्नो जीउ बनाउँछ । रुख मोटाउनु भनेको वायुमण्डलको ग्याँस रूपी कार्वन शोषण गरी ठोस वनाउनु हो । तर त्यही रुखलाई विनास गरिएमा वा नाश गरेमा कार्वन निस्कन्छ । वनले कार्वन निकाल्न पनि सहयोग गर्दछ, कार्वन सोसेर पनि राख्छ, कार्वन सञ्चय पनि गर्दछ । वनको वहुआयामिक भूमिका रहेको छ ।
मानव सिर्जित कारणले वायुमण्डलमा कार्वन बढी रहेको छ । त्यसलाई रोकेर वा शोषेर वायुमण्डलाई अनुकुलित वनाउने प्रयास गर्नु पर्ने हो । वायुमण्डलमा कार्वन वढ्नु भनेको हामीले हरितगृह ग्याँसहरू फाल्नु हो । यस्ता ग्याँस फाल्नुमा हामी नेपाल र नेपालीको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएको यस्ता ग्याँस मध्ये ०.००२५ प्रतिशत मात्र नेपालले फाल्ने गर्दछ । धनी तथा औद्योगिकमुलुकले आफ्ना विकास निर्माण, विलाशितापूर्ण जीवन पद्धति र औद्योगिक उत्पादन गर्दा निस्कने कार्वनले विश्वलाई गाँजिरहेको छ । यसैको कारण भैरहेको छ जलवायु परिवर्तन । जसका कारण हामी जस्ता गरिव देशको जीवन पद्धति कष्टकर वन्न गैरहेको छ ।
कार्वन उर्त्र्सजन -निकाल्ने) धनी मुलुक, मारमा पर्ने हामी जस्ता गरीवमुलुक भएको छ । धनी वा धनीमुलुकसँग धेरै विकल्प छन् ती प्रयोग गर्दछन् । हामीसँग त्यस्ता विकल्प प्रयोग गर्ने सामर्थ्य नैं छैन । उदाहरणका लागि हेरौन, नेपालमा गर्मीले पनि गरिव नैं मरेको पाईन्छ अनि जाडोले पनि गरिव नैं । हाम्रो पनि धनी समुदायहरू गर्मीमा पंखा तथा वातानुकूल कोठा प्रयोग गर्दछन् अनि जाडोमा पनि टन्न शिरक ओड्छन् तर गरीव समुदायको त्यो सामर्थ्य नैं हुँदैन । यही अवस्था गरिव देश र धनी देशमा पनि रहेको छ । अमेरिकन एक जनाले प्रयोग गर्न सक्ने साधन स्रोत वरावरको २६७ जना नेपालीले उपयोग गर्ने गरेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ ।
कार्वन उर्त्र्सजन गर्ने कार्य -ग्याँस निकाल्ने) धनीमुलुक वा औद्योगिक देशहरूले गरी रहेका छन्, उनीहरूले फालेको ग्याँसलाई हाम्रा रुख विरुवाले सोसेर लिएका छन् । उनीहरूले फालेको फोहोर हाम्रा रुखहरूले खाएर वायुमण्डललाई सन्तुलित बनाउने कार्यमा योगदान गरिरहेकाछन् । कार्वन उर्त्र्सजन गर्ने उद्योगले सो वरावरको ग्याँसलाई ठोसमा रूपान्तरण गर्ने समुदाय वा देशलाई रकम दिने प्रक्रिया नैं कार्वन व्यापार हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जती कार्वनलाई ठोस रूपमा राखेको छ त्यति वरावरको रकम कार्वन उर्त्र्सजन गर्नेवाट लिने प्रक्रिया नैं कार्वन व्यापार हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा व्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको विश्व वातावरण सम्मेलनवाट विश्वका अधिकांश देशको सहमतिमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयूक्त राष्ट्र संघिय प्रारूप महासन्धी १९९२ तयार भएको छ । यसलाई नेपालले १९९४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यस महासन्धीको आधारमा कार्वन व्यापारको वहस भैरहेको छ ।
महासन्धीको मर्म अनुसार कार्वन बढी निकाल्ने देशले कार्वन कम निकाल्ने वा कार्वन रोकेर राख्ने वा शोषण गरेर राख्ने देश वा समुदायलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कृत गर्नु पर्ने अवधारणा रहेको छ । हावालाई वोरामा प्याकिङ गरी वेच्ने कुरा होइन । हाम्रा रुख विरुवा कति कार्वन सञ्चय गरेर राखियो, कति ग्याँस रूपी कार्वनलाई तानेर ठोस वनायो, कति वन जोगायो त्यसको प्राविधिक रूपमा समेत लेखाजोखा गरी किनवेचको प्रक्रिया हुने गर्दछ । अनि उद्योगहरूले कि उत्पादन वन्द गर्नु पर्‍यो कि कार्वन उर्त्र्सजन गरे अनुसारको कार्वन सञ्चय गर्नेलाई पैसा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो कार्वन किन्ने भनेको औद्योगिक मुलुक वा ति देशमा रहेका उद्योगहरू नैं हुन् ।
हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानबाट वायुमण्डलमा भएको कार्वन शोषण गर्ने सबै भन्दा सस्तो, छिटो तथा प्रभावकारी तरिका नैं वन जोगाउनु हो । धनीमुलुकले यो गर्न सक्ने ठाउँ नैं वाँकी छैन । कल्पना गरि हेरौन, हाम्रो काठमाडौंको कंक्रिटको शहरलाई हटाएर रुख विरुवाको जंगल वनाउन संभव छ त - कदापी संभव छैन । त्यसैकारण धनी देश तथा उद्योगीहरू हाम्रा जस्ता देश उपयुक्त हुनेदेखि यतातिर आकषिर्त भैरहेका छन् ।
कार्वन व्यापारको चर्चा चलिरहँदा कार्वन माथिको स्वामित्वको प्रश्न सँगसगै जन्मी रहेको छ । हुनत यो आवश्यक थिएन । किनकी जसले वन जंगल जोगायो उसैले कार्वन विक्री गरेको रकम पाउनु पर्ने हो । तर अहिले सामुदायिक वनको अभ्यास हेर्दा वन पैदावर समुदायको जमिन राज्यको रहेको छ । कार्वनको हिसाव निकाल्दा जमिन माथि ८० प्रतिशत हुन्छ भने जमिन मुनी २० प्रतिशत कार्वन रहेको हुन्छ । अव जमिनमुनीको जरामा रहेको कार्वन समुदायको हुँदैन भन्ने अत्तो थापी रहेको अवस्था छ । रुख नहुँदो हो त जमिनमुनी जरा चाँहि बाँची रहन्थे - पारी गाँउवाट खरायो दौडेको देख्ने फुस्रा डाँडाहरू समुदायको वलले नैं हरिया भएका हुन् । कार्वन व्यापारको कुरा चल्यो अनि सरकार वा सरकारी कर्मचारी सल्वलाउन थाले । समुदायहरू सबै श्रोत माथि हकको कुरा उठाइ आन्दोलन गरिरहेको छ तर सरकार भने प्रतिगामी तरिकाले समुदायसँगको भएको परम्परागत हक समेत खोस्ने कानून बनाउने प्रयास गर्दैछ । यसको अर्को पाटो कार्वन व्यापारवाट पैसा आउँछ भन्ने आशले वन माथिको परम्परागत निर्भरतालाई संझौता गरिनु हुन्न ।
ग्रामीण परिवेशको जीविकाको साधन वन हो । त्यसकारण वनमा प्रवेश नगर्ने अनि पैसा पाउने कुरा हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन । वनको समुचित प्रयोग गर्ने त्यसो गर्दा पनि हाम्रो सामुदायिक वनको अवधारणाको कारण वन वृद्धि भैरहेको छ । वनको हैंसियतमा कमी आएको छैन । त्यसरी दिगो वन व्यवस्थापन गरे वापत कार्वन वढी उर्त्र्सजन गर्ने देशले हाम्रो समुदायलाई पुरस्कृत गर्छ भने किन नलिने भन्ने हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो सम्पत्ति हाम्रै भण्डारमा राखेर दिगो तरिकाले प्रयोग गरिरहँदा कसैले पैसा दिन्छ भने त्यो राम्रै हो भन्ने मात्र हो । तर यसको नाममा वन व्यवस्थापन गर्न नैं नपाउने हो भने हामीलाई त्यस्तो रकम चाँहिदैन । हाम्रो परम्परागत वन माथिको हकमा कदापी संझौता हुन सक्दैन । त्यसै गरी कार्वन व्यापरवाट हामीलाई उल्लेखनीय रकम आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । व्यापारको लागि गर्नु पर्ने प्राविधिक पक्ष लगायतका तयारी हाम्रा लागि आकासको फल आँखा तरी मर पनि हुन सक्नेछ । तर यो अवसरलाई क्षमता विकास तथा वन अधिकारको अभियानसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । सामुदायिक वन क्षेत्र वाहिरका रुख विरुवा वा वन जंगलमा पनि कार्वन रहेको छ । यस माथिको स्वामित्वको वहस हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने सामुदायिक वनको अभियानलाई थप प्रवर्द्धन गरी सरोकार तथा अधिकारवालासँगको सहकार्यमा कार्वन व्यापारवाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय समुदाय अझ वनमा आश्रति वर्ग, विपन्न वर्गमा पुर्‍याउने रणनीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ला भन्ने आशा आमसमुदायले वोकेका थिए । तर सरकार वैमौसमी वाजा वजाउँदै संविधान वनाउने वेलामा वन ऐन संशोधनको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । समुदाय तथा नागरिक केन्द्रित संविधान वनाउनु पर्ने थियो तर त्यतातिर ध्यानै छैन । नेपालमा मात्र नभै विश्वमा नैं कहलिएको लोकतान्त्रीक कानून वन ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्न कस्सेर लागेका छन् । नयाँ संविधान आए पछि ऐनहरु संशोधन वा परिमार्जन त गर्नै पर्छ त्यतिखेर समुदायको परामर्शवाट परिमार्जन गर्दा के व्रि्रने थियो र - अर्को पक्ष भनेको ऐन कानून संशोधन गर्ने भनको भएका राम्रा कामलाई प्रवर्द्धन गर्न वा अससिजला गाँठाहरु फुकाउन हुनु पर्ने हो तर विडम्वना भएको छ । सरकारले तयार गरेको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, सिंहदरवारका वरीपरी झुम्नेहरू हाम्रो गाउँले परिवेश चिन्दैनन् वा विर्सिएका छन् । माटो खन्नु, दाउराको भारी वोकी ल्याउनु र जडिवुटी टिप्नु वन अपराध हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
परम्परागत रूपमा वनमा आश्रति वर्गले दाउरा काटी एक भारी दाउरा वेचेर जीवन चलाएकाहरू अव अपराधी हुने भए
अनि हाम्रो ग्रामिण परिवेशमा उर्जाको प्रमुख श्रोत भनेको दाउरा हो । दाउरा नभै जिन्दगीको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यो कार्य गर्न नपाइने भो । त्यसै गरी गाई, वाख्रा चराउन नपाईने व्यवस्था राख्न खोजिरहेको छ । अव नेपाल कृषि प्रधान देश नहुने भो क्यार कि नेपाली सवैको पेशा परिवर्तन हुने हो । यस्ता वकमफुसे प्रावधानहरू राखिंदैछ । यसता व्यवस्थालाई दिगो वन व्यवस्थापनसँग जोडेर व्यवस्थित गर्न स्थानीय समुदायलाई अधिकार दिनु पर्नेमा राज्यले के लछारपाटो लाउन खोजिरहेको छ । धेरैलाई अचम्मित पारेको छ । त्यति मात्र होईन, नेपालमा काठको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन, झ्याल ढोकामा आल्मुनियम प्रयोग गर्नु वाध्यता परिरहेको छ तर प्रस्तावित वुँदामा काठलाई विदेश निकासी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसता वेतुकका प्रावधानहरू राख्न खोज्दा पनि हाम्रा नेताहरु कर्मचारीतन्त्रको लहैलहैमा लागेर हो मा हो मिलाई संशेाधनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिईरहेका छन् । नागरिक सर्वोच्चताको भाषण ठोकेर नथाक्नेहरू पनि जनतालाई धेर अधिकार दिईएछ भनेर आत्मआलोचित भएका छन् रे । अनि भनिरहेका छन् जनताको अलिकति अधिकार झिक र कर्मचारीमा राख । कस्का लागि आन्दोलन गरेका रहेछन् यो कुरा वुझ्नलाई हामी जस्तालाई गाहृो पर्न थालो । नागरिक सर्वोच्चता भनेको समुदाय वा जनतालाई अधिकार दिने हो की कर्मचारीलाई दिने हो वा अरु कसैलाई - नागरिक, समुदाय सवल भैं विधिको शासन हुन सकेमा मात्र राज्य वलियो हुन्छ भन्ने कुराको चेत कहिले खुल्ने होला ।